Otu esi atụgharị foto na PDF na Android | Androidsis
Edere Ferreno | 22/11/2021 14:00 | Gam akporo Ndị aghụghọ
Ekwentị anyị Android bụ ngwaọrụ na-enye anyị ọtụtụ ọrụ dị iche iche, ekele maka nke anyị nwere ike nweta ihe kacha mma na ya. Ihe anyị nwere ike ime na ekwentị anyị bụ tọghata faịlụ n'etiti dị iche iche formats. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-ekwe omume ịtụgharị foto na PDF, ma ọ bụ foto JPG ma ọ bụ PNG. Nhọrọ abụọ a dịtụ ekwe omume na ekwentị Android ma ọ bụ mbadamba.
Enwere ike n'oge ụfọdụ ịkwesịrị ịgbanwe foto ka ọ bụrụ PDF na gam akporo. N'okpuru ebe anyị na-egosi gị dị iche iche nhọrọ na anyị nwere dị na nke a, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ nyefee foto na anyị nwere na ekwentị na a PDF format. Anyị nwere ike ịmalite usoro usoro, ha niile dị mma iji, yabụ na enwere ihe dabara na ihe ị na-achọ.
2 Osisi na ekwentị mkpanaaka Android gị
3 Ngwa iji tọghata foto ka ọ bụrụ PDF
3.1 Foto dị na PDF Ihe Ntụgharị
4 Tọghata Image ka PDF
Nhọrọ dị mma nke ukwuu nke na-eche na anyị ekwesịghị ịwụnye ihe ọ bụla na mkpanaka bụ iji ibe weebụ tọghata foto ahụ ka ọ bụrụ faịlụ PDF. Enwere ọtụtụ ibe weebụ nke na-eme ka nke a kwe omume, ọtụtụ n'ime unu nwere ike mara ụfọdụ aha. Nke a bụ usoro pụtara ìhè nke ukwuu na anyị nwere ike ime ozugbo na ihe nchọgharị na ekwentị, nke mere na anyị agaghị etinye ihe ọ bụla.
Dị ka anyị kwuru, enwere ibe weebụ dị iche iche anyị nwere ike ịtụgharị na nke a. Ọtụtụ ndị ọrụ mara aha dị ka Format PDF, mana ị nwekwara ike iji nhọrọ dịka Smallpdf na nke a. Ọ bụrụ na anyị ejiri webụsaịtị a gbanwee foto ka ọ bụrụ PDF na gam akporo, usoro anyị ga-eso bụ:
Mepee ihe nchọgharị na ekwentị gam akporo gị.
Tinye SmallPDF (ma ọ bụ webụsaịtị ị họọrọ ịgbanwe faịlụ ndị ahụ).
Họrọ nhọrọ iji tọghata JPG ka ọ bụrụ PDF (ọ bụrụ na foto a bụ PNG, họrọ ịtụgharị site na PNG ka ọ bụrụ PDF).
Bulite foto ịchọrọ ịtụgharị.
Chere ka ebugo ya na webụ.
Pịa bọtịnụ mepụta PDF.
Chere ka usoro a mezue (ọ ga-ewe sekọnd ole na ole).
Budata PDF na ekwentị gị.
Ozugbo ị nwetagoro PDF ahụ, i nwere ike iji ya mee ihe ọ bụla masịrị gị. Ị nwere ike izipu ya site na email ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ, yana inwe ike bulite ya na webụsaịtị, dịka ọmụmaatụ. Usoro a dị nnọọ mfe, dịka ị hụla. Ọ bụghị ihe na-ewe obere oge, n'agbanyeghị na anyị kwesịrị inwe njikọ Ịntanetị mgbe niile ma ọ bụrụ na foto anyị bugoro dị arọ, ọ nwere ike iwe oge na-erikwu data mkpanaka. Ya mere, ọ nwere ike ịka mma ka ọtụtụ ndị na-eji WiFi eme ya.
Osisi na ekwentị mkpanaaka Android gị
Usoro nke abụọ a bụ ihe na-abụghị ndị ọrụ gam akporo niile ga-enwe ike iji. Ọ dabere na oyi akwa nhazi nke mkpanaka gị, mana ụfọdụ n'ime ha bụ na-enye ohere iji tọghata foto na PDF, dị ka ọmụmaatụ. Yabụ na ị gaghị achọ nbudata ngwa na ekwentị ma ọ bụ mbadamba iji rụọ usoro a. Ọ bụ ihe dị mma nke ukwuu, n'agbanyeghị na ọ na-abụkarị ihe enwere ike iji naanị otu foto mee otu oge, yabụ ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ foto ọ bụ ihe na-adị arọ ma were ogologo oge.
Ihe kacha mma ime bụ ịnwale ma nhọrọ a dị na ekwentị gam akporo gị. Ebe ọ bụ na ọ bụrụ otú ahụ, ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị karịsịa, ebe ọ bụ na ịkwesighi ịmalite ngwa ndị ọzọ iji tọghata foto ndị ahụ ka ọ bụrụ faịlụ na PDF. Usoro ị ga-eso na nke a bụ:
Mepee ngwa gallery na ekwentị gam akporo gị.
Chọta foto ịchọrọ ịtụgharị ka ọ bụrụ PDF.
Pịa na akara ngosi nke ntụpọ atọ kwụ ọtọ na foto ahụ, nke ga-emepe ihe ndị gbara ya gburugburu na ihuenyo.
Họrọ Mbubata dị ka PDF nhọrọ (ma ọ bụ ihe yiri ya, aha ga-adabere na customization oyi akwa nke ekwentị gị).
Chere ka ntụgharị ahụ ga-agwụ.
Mgbe nkeji ole na ole gachara, ị ga-enwerịrị PDF nke a ga-echekwa na ekwentị Android gị, n'ebe ị họọrọ ya. Mgbe ahụ, ị ​​​​ga-enwe ike iji faịlụ a rụọ ọrụ n'ụdị PDF ahụ, nke ọtụtụ ndị ọrụ na-adị mfe inwe ike gbanwee ma ọ bụ rụọ ọrụ na ya.
Ngwa iji tọghata foto ka ọ bụrụ PDF
Nhọrọ nke atọ bụ iji ụfọdụ Ngwa Android nke eji atụgharị foto ahụ ka ọ bụrụ PDF. Na Play Store anyị nwere ezigbo nhọrọ nke ngwa dị na-enye anyị ohere ịgbanwe faịlụ n'ụdị dị iche iche, ya mere, ha bụ nhọrọ anyị nwere ike iji na mobile ma ọ bụ tabletị anyị. Nke a bụ nhọrọ nke nwere ike ịmasị ma ọ bụrụ na usoro a bụ ihe anyị ga-eji oge ụfọdụ na ngwaọrụ anyị ma ọ bụ ma ọ bụrụ na anyị ga-agbanwe ọtụtụ faịlụ n'otu oge.
Ọzọ anyị na-aga ikwu banyere a di na nwunye nke ngwa na anyị nwere ike ibudata na android ime nke a. Ndị a bụ ngwa ndị ị nwere ike ibudata n'efu wee si otú a na-eme usoro a ozugbo na ekwentị gị mgbe ọ bụla ịchọrọ. Ndị a bụ nhọrọ kacha mma maka gam akporo.
Nke a mbụ ngwa bụ otu n'ime ndị kasị mara amara na kacha mma iji tọghata foto ka PDF na Android. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere ime ya n'ụzọ dị iche iche, n'ihi na anyị nwere ike iji foto sitere na gallery ma ọ bụ foto anyị na-ese n'oge ahụ na igwefoto, nke mere na a ga-atụgharị ihe oyiyi ahụ n'ime faịlụ PDF ahụ chọrọ. Nke a na-eme ka ọ bụrụ ngwa dị mma iji, n'ihi na anyị nwere ike itinye ya n'ọnọdụ dị iche iche na ọ na-adaba na ụdị ndị ọrụ dị iche iche.
Ngwa nwere n'ezie mfe iji interface, nke mere na onye ọ bụla gam akporo ọrụ ga-enwe ike iji ya na-enweghị nsogbu ọ bụla. Mgbe imepe ya na ekwentị ma ọ bụ mbadamba, naanị anyị ga-ahọrọ ọrụ a ga-arụ, wee họrọ foto (site na gallery ma ọ bụ igwefoto) wee chere ka ọ gbanwee ka ọ bụrụ faịlụ PDF ahụ achọrọ. Mgbe ahụ, anyị nwere ike ịnye PDF aha nke emepụtara na foto ahụ wee mee ihe anyị chọrọ na faịlụ ahụ (zipụ ya site na mail, dịka ọmụmaatụ). Emechara usoro a n'ime ihe nke sekọnd.
Ihe Ntụgharị Foto ka PDF bụ ngwa anyị nwere ike free download na gam akporo, dị na Play Store. N'ime ngwa anyị nwere mgbasa ozi, nke na-adịghị emerụ ahụ, yabụ anyị ga-enwe ike iji ya na-enweghị nsogbu ọ bụla na ekwentị. Ị nwere ike ibudata ya na njikọ a:
Developer: NT LLỌ
Ngwa ọtụtụ ndị ọrụ Android nwere na ekwentị ma ọ bụ mbadamba ha bụ Microsoft Office, na ụfọdụ ekwentị a na-etinye ya na ndabara. Afọ ole na ole gara aga, ngwa a nwere nnukwu nhazigharị, nke butere iwebata ọtụtụ ọrụ ọhụrụ. Otu n'ime ihe ọhụrụ ewepụtara n'oge ahụ bụ ikike ịtụgharị foto ka ọ bụrụ PDF. Yabụ na ọ bụ ngwa anyị nwere ike iji maka nke a, ebe ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike tinye ya na ngwaọrụ gam akporo ha.
Nke a bụ ihe onye ọrụ ọ bụla nwere Microsoft Office na gam akporo ga-enwe ike ime. Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere ngwa na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba, usoro iji tọghata foto ka ọ bụrụ PDF na ngwa a bụ ndị a:
Mepee Microsoft Office na ekwentị gị.
Pịa bọtịnụ +.
Họrọ Foto nhọrọ wee họrọ foto ka ị bulite ma ọ bụ were igwefoto mkpanaka see foto n'oge ahụ.
Pịa na bọtịnụ na-ekwu ụdị faịlụ, nke dị na ala ihuenyo ahụ.
Họrọ PDF (ọ ga-egosi gị na ihuenyo mgbe ị gbanwere ụdị faịlụ).
Pịa Emela ya.
Agbanwelarị foto a ka ọ bụrụ PDF.
Chekwaa PDF ahụ na ekwentị gị.
Microsoft Office: Okwu, Excel, PowerPoint na ndị ọzọ
Tọghata Image ka PDF
Ngwa nke atọ na ndepụta a bụ nhọrọ ọzọ na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ gam akporo, ebe ọ bụ otu n'ime ngwa kachasị mma ma a bịa n'ịgbanwe foto na PDF. Ngwa a ga-enye gị ohere ịgbanwe foto ọ bụla ka ọ bụrụ PDF, ebe ọ na-enye nkwado maka ụdị dị ka JPG, PNG ma ọ bụ TIFF, dị ka ọmụmaatụ. Nke a ga-eme ka onye ọrụ ọ bụla nọ na sistemụ arụmọrụ nwee ike iji ya gbanwee foto ndị ahụ.
Na mgbakwunye, ngwa a nwere a n'ezie mfe iji interface. Ịbulite foto na ngwa ahụ, nke anyị ga-atụgharị n'ime faịlụ PDF ahụ chọrọ bụ ihe dị mfe n'ezie, nke ga-ewe naanị sekọnd ole na ole. Ngwa ahụ na-enyekwa ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ na faịlụ, dị ka ịgbanwe nha ha, nke na-enyere aka mee ka ojiji ha dịkwuo mma mgbe niile.
Ngwa a nwere ike ịdị budata n'efu na gam akporo, dị na Google Play Store. N'ime ya, anyị nwere mgbasa ozi, mana ha abụghị ihe na-enye nsogbu mgbe ị na-eji ya na ekwentị. Ị nwere ike ibudata ngwa a site na njikọ a:
Tụgharịa onyonyo ka ọ bụrụ PDF - Foto ka ọ bụrụ PDF, Ntụgharị PDF
Developer: Mfe Design Ltd.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Ndị aghụghọ » Otu esi agbanwe foto ka ọ bụrụ PDF na gam akporo